जसपाको निर्णय : सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न अभियान चलाउने – Tharuwan.com
जसपाको निर्णय : सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न अभियान चलाउने
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक ५ गते ७:१८
जनता समाजवादी पार्टीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । मंगलबार सकिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले डा. भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाएको हो ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले नेतृत्व गर्ने संघीय परिषद्प्रति केन्द्रीय समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने विधान पनि बैठकले पारित गरेको छ । सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकले केन्द्रीय समिति संघीय परिषद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्ने विधान पनि पारित गरेको पार्टीका युवा नेता विश्वदीप पाण्डेले बताए ।
बाँकी निर्णयका लागि पाँचजना शीर्ष नेतालाई अधिकार दिएको पाण्डेले जानकारी दिए । पाँच शीर्ष नेतामा डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र महतो रहेका छन् । केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा ठाकुर र यादव रहेका छन् ।
बैठकले संघीय सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
One thought on “जसपाको निर्णय : सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न अभियान चलाउने”
Ram Bahadur Tharu says:
LeaveaReply to Ram Bahadur Tharu Cancel reply